ဘောလုံးဟောကိန်းများ Santos vs Atletico Goianiense 25 July 2021
Santos0Atletico Goianiense 1
ရေနံချောင်း ခန့်မှန်းချက် — 5ခန့်မှန်းချက်များ
1xTipz (56.88% ရေနံချောင်း / 5840) Santos အနိုင်ရသူ
BallkhmerBettor (52.46% ရေနံချောင်း / 650) Santos အနိုင်ရသူ
Asianbookies (75.41% ရေနံချောင်း / 12020) Santos အနိုင်ရသူ
ဒီမှာ ပွဲ၏အခမဲ့ဟောကိန်းများ Santos vs Atletico Goianiense ဒီ၏ Jul 25, 2021 ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် ဘရာဇီးစီးရီးအေ
လောင်းကစားခြင်းအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်များကားအဘယ်နည်း Santos vs Atletico Goianiense?
ခန့်မှန်းခြင်းနည်းလမ်း - bet-in-asia.com ဆိုဒ်သည်ကိန်းဂဏန်းများအနက်နှင့်ရာခိုင်နှုန်း၏အနက်ကိုအခြေခံသည် သင်္ချာပုံသေနည်း ၎င်း၏ပေးရရှုပ်ထွေးဒေတာ၏ ရလဒ်များကိုအခမဲ့ဟောကိန်းများ အပေါ် Santos vs Atletico Goianiense အစည်းအဝေး။ လုပ်ခွင့်ပြုသည့် technique ကို တိကျသောခန့်မှန်းချက်များ ထိုနေ့၏ပွဲစဉ်ပေါ်မှာ ဘရာဇီးစီးရီးအေ of Jul 25, 2021
အဆိုပါ Datasets ဖို့အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းလောင်းကစားကိုကူညီပါ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်လောင်းကြေးကမ်းလှမ်းမှုတွင် - 1x2 Santos အနိုင်ရ၊ Atletico Goianiense အနိုင်ရ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အရေအတွက် sဒီပွဲမှာဒါမှမဟုတ်ရမှတ်ထဲမှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ် အတိအကျရမှတ်.
၏ရည်မှန်းချက် Zé Roberto
အစားထိုး Lucas Braga
အားဖြင့် Luiz Felipe
အစားထိုး André Luis
အားဖြင့် Zé Roberto
အစားထိုး Gabriel Pirani
အားဖြင့် C. Sánchez
အစားထိုး Arthur Gomes
အားဖြင့် Gabriel Baralhas
အစားထိုး Marcos Leonardo
အားဖြင့် Felipe Jonatan
အစားထိုး Jonas Toró